fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Samsung Galaxy S6, nanolotra ny sainam-panamboarana vaovao an'ny mpanamboatra
Alfonso ny voankazo | | MWC, Samsung
Farany tonga ny andro lehibe. Samsung dia nilalao betsaka tamin'ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 Ary, rehefa avy nanandrana ny sainam-pianakaviana vaovao an'ny Galaxy S fianakaviana mpamokatra Koreana, dia tsy ho tsara kokoa ny fahatsapana.
Tamin'ny voalohany, rehefa nahalala ny momba ny Project Zero izahay dia nieritreritra fa hampiasa fanovana famolavolana i Samsung, na dia namoaka aza izany taty aoriana Ny fiovana dia mitoetra amin'ny fitaovana ampiasaina ho an'ny fananganana ny S6. Ary tsy maintsy ekena fa, amin'ity indray mitoraka ity, Samsung dia nahatratra ny marika tamin'ny Samsung Galaxy S6.
1 Famolavolana maharitra miaraka amin'ny famaranana premium
2 Fampisehoana mahavariana fotsiny
3 Fakan-tsary 16 megapixel miaraka amin'ny fanamafisana ny sary optika
4 Ny vidiny sy ny fisian'ny Samsung Galaxy S6
Famolavolana maharitra miaraka amin'ny famaranana premium
fepetra X X 143.4 70.5 143.4 MG
Samsung Very setroka teo an-tsena aho, nanjaka tato anatin'ny taona vitsivitsy niaraka tamin'ny totohondry vy nataon'ny mpanamboatra Koreana. Ny ankamaroan'ny vahoaka dia nangataka ny handao ny polycarbonate hampiasa fitaovana avo lenta. Ary nihaino azy ireo i Samsung, eny, nihaino azy ireo izy.
Ary amin'ity indray mitoraka ity dia nisafidy ny Samsung Galaxy S6 ny mpanamboatra miaraka amin'ny famaranana kalitao. Ny vatany misy faranana vy amin'ny zana-kazo, manana sosona vera marokoroko ao ambadiky ny fitaovana, tena ao amin'ny fomban'ny Sony Xperia Z range, ary mahafinaritra ny fahatsapana ny mikasika.
Mariho fa ny vera ao ambadika misy aFiarovana Gorilla Glass 4. Ny iray amin'ireo olana amin'ny telefaona amin'ity karazan-pitaovana ity dia marefo izy ireo amin'ny vongan-tany sy rano mitete tsy nahy. Ny fampidirana an'io sosona io avy any Corning dia hanome fanoherana lehibe ny fitaovana.
Raha tsy izany dia mahita fitaovana mitazona ny volon'ireo teo alohany isika, na dia amin'ity tranga ity aza Izy io dia lakroa eo anelanelan'ny Samsung Galaxy S5 sy ny Samsung Galaxy Note 4. Izaho manokana dia tena tiako ny vokany, na dia manandrana aza ny loko.
Fampisehoana mahavariana fotsiny
Niavaka hatrany i Samsung noho ny kalitaon'ny efijery misy ny sainam-pireneny ary ny Samsung Galaxy S6 dia tsy ho diso anjara amin'izany. Ny tontonana Super AMOLEd manana 5.1-inch dia manome a 2560 x 1440 piksel, mahatratra ny hakitroky ny pixel tafahoatra: 577ppp. Nanatsara ny famirapiratan'izy ireo nahatratra 600 nits koa izy ireo, amin'izay azonao ampiasaina ilay fitaovana amin'ny toe-javatra rehetra.
Ireo famaritana izay efa tafaporitsaka tato anatin'ny volana vitsivitsy dia voamarina. Amin'izany fomba izany dia manapa-kevitra ny mpanamboatra hametraka ny Qualcomm any ivelany ary hiloka amin'ny SoC azy manokana, amin'ity tranga ity a Exynos 7420 14nm sy maritrano 64-bit misy cores valo, efatra amin'ny 2.1 GHz ary hafa efatra amin'ny hafainganana famantaranandro 1.5 GHz.
Asongadino ny RAM 3 DDR4 XNUMX GB izay mampanantena fahombiazana mihoatra ny ampy ho an'ny terminal avo lenta. Hisy kinova telo miaraka amin'ny tahiry anatiny 32, 64 na 128 GB. Ny hany nefa hitantsika dia ny zava-misy fa Samsung dia tsy maintsy nanao raha tsy nisy ny slot micro SD card. Faharatsiana ateraky ny famolavolana sy ny famitana ny fitaovana vaovao.
Ny bateria dia hampidirina ary hanana a 2.550 mAh fahafaha-manao. Tamin'ny voalohany dia toa somary zara aza, indrindra raha raisintsika ny toetra teknikan'ny Samsung Galaxy S6, saingy tsy maintsy tadidintsika fa ny processeur vaovao dia mandany kely noho ny maodely teo aloha.
Tsy maintsy miandry isika hitsapana azy tsara raha toa ka nahomby ny mpanamboatra. Ny antsipiriany mahaliana dia ny mahazatra famandrihana tsy misy tariby, WPC ary PMA, ary fomba fiasa haingana izay manome fampisehoana 4 ora aorian'ny famahanana 10 minitra. Amin'ny haavon'ny fifandraisana, ny
Samsung Galaxy S6 dia hanana manohana LTE, NFC, Bluetooth 4.0, WiFi sy ny fo tahan'ny sensor.
Samsung dia nanatsara ny mpamaky ny rantsan-tànana hatramin'ny fotoana izao dia tsy mila mihetsika ny rantsan-tànanao hampavitrika azy.
Fakan-tsary 16 megapixel miaraka amin'ny fanamafisana ny sary optika
Ny iray amin'ireo filokana lehibe an'ny Samsung miaraka amin'ny S6 dia miaraka amin'ny fakantsary. Ary moa ve ilay sainam-pirenena vaovao dia misy a Fakan-tsary megapixel 16, ilay sensor ihany fa ny Note 4 dia miakatra, na dia nanatsara ny fizarana mahaliana roa aza izy ireo.
Amin'ny lafiny iray dia manana isika vavahady lehibe kokoa, manomboka amin'ny f2.2 ka hatramin'ny f1.9 izay ahafahana misambotra hazavana bebe kokoa. Nandritra ny famelabelarana dia naneho ohatra vitsivitsy izy ireo ary tsy maintsy lazaina fa tena tsara ny fakantsary an'ny Samsung Galaxy S6.
Ankoatr'izay, ny Galaxy S6 dia mampiditra a fanatsarana fifantohana sy hafainganam-pandeha mahavariana. Raha ny momba ny fakantsary eo aloha, dia nisafidy solomaso 5 megapixel ny mpanamboatra tamin'ity indray mitoraka ity
Ny vidiny sy ny fisian'ny Samsung Galaxy S6
Tamin'ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 dia nanambara izy ireo fa ilay fiasa ho an'ny Koreana vaovao Hamely ireo magazay amin'ny 10 aprily io. Hita amin'ny Pearl White, Sapphire Black, Platinum Gold ary Topaz Blue, ny maodely 32 GB dia antenaina handoa 699 euro, ny 64 GB kinova 799 euro, raha ny maodely 128 GB kosa hahatratra 899 euro.
Raha fintinina, terminal iray misy pint tsara indrindra, na dia misy antsipiriany telo aza tsy azontsika raha oharina amin'ny teo alohany. Amin'ny lafiny iray, misy ny fiainana bateria, ambany noho ny an'ny Samsung Galaxy S5. Ary etsy ankilany ny zava-misy fa ny Samsung Galaxy S6 dia tsy matevina. Ankoatra ny zava-misy fa ny Galaxy S6 dia tsy mamela hanitatra ny fitadidiany.
Fakan-tsary tena matanjaka
Tsy misy slot karatra SD io
Mihevitra ve ianao fa nahomby tamin'ny Samsung Galaxy S6 i Samsung?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S6, nanolotra ny sainam-panamboarana vaovao an'ny mpanamboatra
bobzaguets dia hoy izy:
Manolotra anao ny zava-drehetra, azafady, saingy diso ny baterinao malefaka, raha tsy izany dia tsy mety ny kitkat 4.4.2 miaraka amin'ny fanavaozana azy.
Mamaly an'i bobzaguets
manaova zavatra mahazo ny fanavaozana ratsy anao izay misy ny telefaona finday dia manao ny tsy mety rehetra foana izy ireo izao nefa mandeha foana ny findaiko.
Ahoana ny fomba hilazana fa tsy manonofy mahery vaika ary milaza aminao ny antony P @ & $ ¥ nesorin'izy ireo ny SD dia azo heverina fa ny SD sy ny bateria dia manome tsiny ahy ireo genius fa roa ireo fa tena halako. Volana lasa izay raha ny lamaody rano mangatsiaka no lamaody, ny s5 dia nanohitra ny antsasak'izao tontolo izao ankehitriny fa ny s5 dia mihantsy ny s6. Fa ny rano dia mihoatra ny bateria ary ny SD dia zavatra tsy azo avela. Hividy izany aho amin'ny Mey. Tsy mandà izany aho raha tsy manapa-kevitra amin'ny fanamarihana 4. Na tezitra aho ary manohy amin'ny taranako S5 iray hafa manantena ny hamerina ilay s6 very.
Samsung Galaxy S6 Edge, nanala ny finday voalohany tamin'ny efijery roa miolaka
Ento mankany amin'ny habakabaky ny Ady Lehibe I miaraka amin'i Red Baron: Adin'ny fiaramanidina